Home » वान बेल्ट वान रोड र पर्यावरण श्रृङ्खला-५
- मत-अभिमत, विचार
सबै बिग्रियो र सत्यानाश भयो भन्छौँ तर यसलाई केले सुधार्ने?
नेपालको तथ्याङ्कले व्यापार घाटा बढेको देखाउँछ। त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ? व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ। अनि उत्पादन घटेको छ, के...